Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 17 Qiana | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa, Na-atụ aro
Emepụtara Linux Mint 17 na nso nso a na nnukwu ihe ịga nke ọma. Ọ bụ nsụgharị kachasị ọhụrụ na nkwado ogologo oge (LTS) nke na-eweta mmelite dị iche iche na atụmatụ ọhụrụ iji mee ka ahụmịhe desktọpụ anyị nwee obi ụtọ, nke na-akọwa ihe kpatara ọtụtụ ndị ọrụ nke nkesa a ji mara otu esi tufuo Ubuntu na buru uzo di iche. melite nke anyi post-nwụnye ndu iji nyere ndị ọrụ aka ọhụrụ na Linux.
Na Mmasị Mmasị> Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ anyị nwere ike imelite ma gbanwee (ọ bụrụ na-ịchọrọ) ọkwọ ụgbọ ala nke kaadị eserese ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ na-akpata nsogbu.
Maka mmemme ndị a niile, anyị nwere ike ịkpọtụrụ na peeji nke gọọmentị ha, njikwa Linux Mint ma ọ bụ ọnụ ya. N'otu aka ahụ, anyị na-akwado ịkwado nke a mini-onye-ndu nke na-akọwa otu esi etinye ma hazie nke ọ bụla n’ime ha.
Steam maka Linux (http://store.steampowered.com/search/?os=linux)
Ruo oge ụfọdụ ugbu a, a pụrụ iji nyiwe ihe ntanetị Steam mee nwa amaala. Nke a pụtara na e nwere ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke egwuregwu dị na Steam nke emepụtara iji rụọ ọrụ na Linux.
Iji wụnye Steam, budata faịlụ .deb site na Steam peeji nke.
Mgbe ahụ, ha ga-eji iwu na-esonụ:
Enwere ike ụfọdụ njehie ịdabere. Ọ bụrụ otu a, pinye iwu na-eso idozi ha:
sudo apt-nweta wụnye -f
Mgbe ahụ ị mepee Steam, ọ ga - emelite. Lee Ga-ahụ ndepụta zuru ezu nke egwuregwu Linux dị na Steam.
N'ime afọ "igwe ojii", enwere ike ị nwere akaụntụ Dropbox. Cannwere ike iwunye Dropbox site na Onye njikwa Mmemme. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iwunye ya site na iji iwu na-esonụ: sudo apt-wụnye nkwụnye.
Mcomix: ndị na-atọ ọchị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 17 Qiana
Ihe 58 kwuru, hapụ nke gị
Ndewo, agụrụ m na ụfọdụ ederede na mint 17 na-abịa na nwunye 18 yabụ mmezi windo nke windo (nke na-eme mgbe ị na-ebugharị ha, ha gbanwere nha na ọnọdụ ha na akpaghị aka, n'ihi na m nwalere ya na ndị ọzọ distros na desktọọpụ dịka: manjaro with lxde, Enweghị m mmasị na nke a ma ọlị, onye ọ bụla maara ka esi gbanyụọ ya? Aga m anwa mint 17 mate ugbu a na laptọọpụ ma ọ bụrụ na ịchekwa m oge iji chọpụta oke, ọ bụrụ na ọ bụghị, m ga-agwa gị otu Emere m ya 🙂
Ugbodo 291286 dijo
M na-ahụkwa nduzi yiri nke a na blọọgụ m, mgbe m wụnye Linux Mint Linux 17, naanị na m na-efu ụfọdụ nkọwa na-abịa ebe a ...
«M mere» 🙂
Ezigbo ndu maka newbies, daalụ Pablo.
M dozie njehie:
«Ikekwe ụfọdụ dependency njehie. Ọ bụrụ otu a, pịnye iwu na-esonụ ka ịleghara ha anya:
sudo apt-nwụnye -f »
Kama nke ahụ, anaghị eleghara njehie ndabere na iwu a anya, a na-arụzi ya
Zaghachi na AqaIb8
Ị nwetere ya! Gbazie. Daalụ!
ndewo ọzọ, ị nwekwara ike itinye ụfọdụ nhọrọ nke ndị egwu egwu, ma e wezụga ndị na-abịa na ndabara,
Dị ka Clementine:
Nke a bụ uto onye ọ bụla mana ha bụ ezigbo ndị egwuregwu ... ekele
Ndewo, ajụjụ, kedu ka m ga-esi kwụsị ọrụ egwu ahụ? Ka m kọwaa: Oge ọ bụla m hover na mp3 faịlụ, ọ na-egwu egwu.
Achọpụtara m na ọ na-ewe m iwe wee ruo ugbu a ahụbeghị m ụzọ iji gbanyụọ ya, ma ọ bụghị na enwere m obi ụtọ Linux Mint. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya.
Nnọọ, kedu ka ị mere.
Echere m na ị nwere desktọọpụ Gnome, anaghị m eji ya ogologo oge, mana ma eleghị anya nke a ga-enyere gị aka: http://www.ubuntu-es.org/node/12916#.U5ECo67gIbI
Maka udi ajuju a .. .. gaa na ebe okwua .. ebe anyi ga enyere gi aka karie .. .. ekele ..
Rafa Huete dijo
Ndewo onye ọ bụla. M na-eji Mint eme ihe ruo ọtụtụ afọ, agbalịrị m nkesa ndị ọzọ, ana m alaghachi na Linux Mint na njedebe.
Enwere m ajụjụ, m ga-achọ ịma ma ọ dị onye ọ bụla n’ime unu nwere ike inyere m aka. Isi okwu a bụ ihe ndị a; Maka ụbọchị ụfọdụ nchịkọta 5 ọkwa na-acha uhie uhie na njikwa melite, ha na-ezo aka na kernel. Linux-nkụnye eji isi mee 3.13.0-24 / Linux-image-extra3.13.0.24 ọnyà…. wdg ọtụtụ dị ka nke ahụ. Ajuju m bu, ekwesịrị m imelite ha, ma ọ bụ hapụ ha maka ọkwa 5.
Daalụ nke ukwuu onye ọ bụla. Ahụrụ m blog a n'anya.
Zaghachi Rafa Huete
A kwụsịla Comix ogologo oge (2009), m ga-atụ aro ndụdụ MComix ha: http://sourceforge.net/p/mcomix/wiki/Home/ , Ọzọkwa na ebe nchekwa Mint: http://community.linuxmint.com/software/view/mcomix .
MMA. Daalụ maka data ahụ! Emelitere! 🙂
"EQUALIZER" M na-eji Audacious, ọ biaworị na nhazi ụda ya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, achọghị m ịwụnye pulseaudio-equalizer 🙂
Zaghachi na napsix
Dịka ọmụmaatụ, site na htop site na console ọ na-egosi m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ cores 2 na-eri n'etiti 70% na karịa 90% nke cpu. Ọ ka bụ desktọọpụ mara mma ma dị mfe, na-amasị m n'ezie, ma na-adị ngwa ngwa.
Kedu mgbe ị ga-edozi menu ahụ ka ọ dịrị ọsọ? Ama m na ọ bụghị ịdọpụ ntutu gị kama ha bụ nkọwa
Jiri nchacha bit ... ma ọ bụ ihe yiri ya ... ị ga - ahụkwa ka ụfọdụ ihe si arụ ọrụ ọsịsọ. - mepee menu na nke abụọ, mgbe nhichachara.
Naanị m wụnye Mint OS X nke dabere na Mint 17 Cinnamon na ọ zuru oke, aga m ahụ ihe m na-efu ma m ga-agbaso ụdị ahụ egosiri na nkuzi ahụ.
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta ya.
Daalụ, ị baara m uru nke ukwuu, amatala m sistemu a nke m matara naanị site na nụ ma ọ dịrị mma.
Otu ihe ọzọ, ị ga - ama otu esi eme ka igodo mkpọchi rụọ ọrụ site na mmalite?
Daalụ maka ọrụ gị na oge gị. ekele
Alfonso Teijelo dijo
Ndewo: M si Ubuntu 12.04 kwaga Mint 17, Mate. Ihe bụ, enweghị m ike ịhụ otu esi agbanwe usoro oge, site na 24 ruo "am-pm." Nwere ike ime ka m mara ihe?
Zaghachi Alfonso Teijelo
Ikekwe na njikọ a bụ azịza ya.
Luis: D dijo
mmmm achọrọ m ịma ma ọ ga-enye m na pc a
AMD Radeon hd 7520g discrette-klaasị
6gb ebule ddr3
3090mb ndịna-emeputa kaadị
Achọrọ m ịma ma m nwere ike ịwụnye ngwungwu ụgwọ ubuntu yana njikọ nke ubuntu
na m chọrọ ịmata ma ọ bụrụ na e nwere onye na-anya maka m video kaadị
Zaghachi Luis: D
Haha! I nwere ọtụtụ, onye mmeri ... ị nwere ọtụtụ.
Na igwe ahụ, LM na-efe!
Ọmarịcha! ụmụ linuxmint na-eme ihe nke ọma, ntuziaka dịka o kwesiri ịdị: dị mfe, ihe ndị ọzọ na-eme site na njikwa sọftụwia, m wụnye LM17 Mate ihe dị ka izu 2 gara aga, tupu m jiri kubutu, mana enweghị m ike ịmara ya ma oli. Mate doro anya na desktọọpụ kachasị mma enwere, ọ zuru oke dabere na akụrụngwa ahụ. Mint bụ mgbe m masịrị distro na ihe nyocha 24 mbụ m zụtara maka mint. Ọ dị ezigbo mma!
Enwere distro ọ bụla ọzọ na-abịa na codecs gụnyere?
Ndewo, ọ bụ oge nke atọ m na-eji linux, oge a m nwaa mint 17 ma ọ bụ nke mbụ yiri m enyi, agbasoro m ntuziaka na ihe niile dịkwa mma, ụfọdụ dị iche na windo mana ọfụma, kedu O juru m anya nke ukwuu bụ na mgbe m nwalechara asaa na 10 maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 8, ọ nweghị ụzọ m ga-esi wee lelee ndị nlekota atọ yana otu vidiyo vidiyo ebe kaadị ahụ nwere ntinye atọ, hdmi / dvi / vga, ewezuga naanị enwere nsogbu na ya. vidiyo ma ọ bụrụ na ọ bụghịkwa na HDmi ọdịyo, na nkenke, ihe kacha ịtụnanya bụ na m arụnyere mint na m ga-aga na ihu, enyere m aka na ihuenyo nke atọ, emere m otu ahụ na ọdịyo na ihe niile na-aga, enwere nkuzi ole na ole na-ekwu maka okwu ndị a, eziokwu bụ na enwere m afọ ojuju maka linux a yana ịbụ onye ọzọ, ịbụ oge mbụ na amaghị ihe ọ bụla m ghọtara ihe niile, ezigbo ọkwa, ma nwee nwute Adị m nke ukwuu, ekele
Zaghachi na nkịta ọhịa
Ndewo onye ọ bụla!!
Naanị m wụnye mint mint, na-ekwu na nke a bụ oge mbụ m na-emikpu onwe m na ụwa Linux.
O meela ụbọchị abụọ ma enweghị m ike ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala maka kaadị WiFi ralink m.
Echiche ọ bụla ?? mana biko buru n'uche na enweghị m ihe ọmụma dị n'akụkụ ndị a.
Mgbe m mepere onye ọkwọ ụgbọ ala na mgbe m tinye paswọọdụ m, ọ dịghị ihe ọzọ, ihuenyo na-acha ntụ ntụ nke m nwere ike belata ma ọ bụ mechie ma ọ nweghị ihe ọzọ.
M ga-enwe ekele maka enyemaka gị, ebe ọ bụ na mgbe odyssey a gasịrị, m na-echegharị ma ọ bụ ezi echiche ịbanye n'ụwa a.
hi, enwere m nsogbu na Linux mint 15 olivia, mgbe mmalitere njikwa mmelite ọ na-enye m njehie nke bụ nke a:
W: O nyeghi ike inweta http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80] W: Emeghị ka eweta http: // Ihe nchịkọta 386 achọtaghị [IP: 404 91.189.92.201] W: Emeghị ka achọ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists / raring-updates / multiverse / binary-i80 / Packages 386 Not Found [IP: 404 91.189.92.201] E: filesfọdụ faịlụ ndeksi dara ibudata. Elegharawo ha anya, ma ọ bụ jiri nke ochie eme ihe.
Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu (dị ka ị ga-ahụ, abụ m onye ọhụrụ ha)
O doro anya na ihe na-eme bụ na mgbe ị na-agbalị imelite ya enweghị ike ịchọta adreesị ahụ, n'ihi ya, ọ nweghị ike imelite nchịkọta ndị dị na IP ahụ. Nwalee ụbọchị ọzọ ma ọ bụ jiri adreesị ọzọ lelee ngwugwu ndị ahụ. Cheers
Achọrọ m ịnwale Mint na Cinnamon, mana enwere m obi abụọ banyere ụdị (32/64) enwere m akwụkwọ ndetu Samsung R480 nwere I3 - 3gb Ram, achọrọ m iji ya mee mmemme. Olile anya nye m ntuziaka, ekele.
David Bishop dijo
Ndewo, ozi dị oke mma na nke zuru ezu, maka ndị anyị na-amalite na Linux, ma gbalịa ịhapụ Windows platform.
Zaghachi David Obispo
RODRIGO GARCIA dijo
Ndewo enyi na unu nwere nnọọ mmasị na usoro a na-arụ ọrụ Achọrọ m itinye ya na cyber m nwere PC ha nwere ike inyere m aka
Zaghachi RODRIGO GARCIA
Daalụ maka nkuzi ahụ. Ana m agbalị ime ihe ị kọwara ebe a na Linux Mint 17 Qiana, mana ọ na-ajụ m maka paswọọdụ, dịka ọmụmaatụ iji melite, mana amaghị m paswọọdụ, agbalịrị m paswọọdụ onye ọrụ mana ọ bụghị, nke bụ naanị nke m tinyere Mgbe ị na-ahazi ya, ị nwere okwuntughe ndabara ndabara? Ọ bụrụ otu a, olee otu esi agbanwe ya?
ndo, ọ bụ m mehiere. Edere m paswọọdụ m, ọ bụ nke m debere mgbe m na ahazi aha njirimara ahụ.
joaquin berrios dijo
Enweghi m ike ijikọ onye nrụpụta i320 dị na mpaghara, kedu ka m ga esi eme?
Zaghachi joaquin berrios
Ebe kachasị mma iji jụọ ụdị ajụjụ ndị a ma mee ka obodo niile nyere gị aka: http://ask.desdelinux.net
Isiokwu: Firefox nọrọ na bekee ...
O meela m n'oge ndị ọzọ (nke ikpeazụ na Mint 17 Qiana KDE). Ọ bụrụ na ọ gbanahụ m, ọ naghị amata otu esi eme ya na «Ihe ị ga - eme na - esote ...». Emeziri m ya site na ịwụnye ihe mgbakwunye .xpi site na ibe gọọmentị. N'okwu m
Otu esi eme ya na-akọwa ya nke ọma na n'ụzọ zuru ezu na:
Cehapụ dị ka mgbe niile.
Ọnye na -bụ Carlos Roberts? dijo
Enweghi ike iwunye AWN na Linux mint 17 quiana ????????????????
Zaghachi Carlos Roberts
Adị m onye ọrụ Linux mint ruo ọtụtụ afọ ... mana yana 17 m na-enwe nsogbu na chrome nke m na-enweghị na nsụgharị ndị gara aga yana achọpụtakwa m na ọ dị ntakịrị nwayọ ... Echere m na otu ihe ahụ mere mmadụ ọzọ ..
Enweghị m ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo nke Sis 3 Mirage na windo m nwetara ha, ma ugbu a, mgbe m wụnye lint lint anaghị achọta ha ma amaghị m ebe m ga - enweta ha ...
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ha, ma ọ bụ mara ụzọ ọzọ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, n'ihi na ọ bụ naanị vidiyo ahụ anaghị m arụnye. WiFi, ọdịyo zuru oke maka m ...
Etu esi arụ ọrụ obibi akwụkwọ EPSON XP-201 jikọtara ya na akwụkwọ ndetu yana LINUX MINT 17 QIANA sistemụ arụmọrụ?
Etu esi agba oso Epson XP-201 na ngwa ntinye m na LINUX MINT 17 QIDA sistemu?
Ndewo, aha m bụ Virginia na abụ m ọhụụ na Linux mint. Achọrọ m ịjụ ajụjụ banyere faịlụ ọdịyo nke m budatara na peeji kickass site na iju mmiri, enwere m nsogbu enweghị m ike ịge ha ntị na ekwentị m n'ihi na usoro ọdịyo adịghị adaba, agbalịrị m ịgbanwe ya site na ịmegharị aha ya ima atu o di na. mp3 na enwere m ike .mpeg mana enwetaghị ezigbo nsonaazụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịdụ m ọdụ, ọ ga-abụ nnukwu enyemaka!
Nke mbu anyi gha hu ma anyi mee ka o doo anya. Malitere ikwu maka Linux Mint ma gabazie na Cellular. You nwere nsogbu ahụ na Mint ma ọ bụ na Cellular? Site n'ụzọ, mpeg abụghị usoro ọdịyo, mana vidiyo + ọdịyo. Audiodị ọdịyo bụ .mp3, .ogg, .aac, wdg.
Ana m akwado ka ị gaa na Nzukọ anyị ma ọ bụ Jụọ iji dozie ajụjụ gị. Cheers
Ndewo, azụrụ m kọmpụta na-eweta Linux Mint quiana Linux ma mgbe m chọrọ ịnweta folda dị ka njikwa njikwa ọ na-ajụ m maka paswọọdụ Amaghị m paswọọdụ ọ bụ. mara ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka na nke ahụ, daalụ
Ndewo nu! Kwesịrị ịjụ ajụjụ a na ọrụ anyị na-ajụ FromLinux: ask.fromlinux.net.
Luis Alfredo MOYA dijo
Ndewo, enwere m Linux Mate 13 arụnyere, na m na-achọ imelite ya na 17 nwa oge na enweghị m ike, mgbaghara amaghị m, kedu ihe m ga-eme na otu esi eme? I meela n'ihu ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka. Lusi - Na Na Na -
Zaghachi Luis Alfredo MOYA
Ọ ga-amasị m ịmara ma enwere ike ịse eserese na Linux Mint Qiana na ihe mmemme m kwesịrị iji maka ebumnuche ahụ.
Zaghachi javier arias
Ndewo, n'ezie ezigbo ọkwa maka newbies. Adị m ọhụrụ na ụwa Linux, otu izu gara aga m wụnye nsụgharị 17.1 (Rebbeca) nke m na-eso Win7 na kọmpụta m, ọ na-amasịkarị m inyocha nsụgharị Mint m, emegoro m ya na akụkụ mana m ga-achọ ma ọ bụrụ na ebe ahụ bụ ụzọ ọ bụla iji hazie menu, gbanwee agba ya, nghọta, wdg. Ọnọdụ desktọọpụ m na-eji bụ Xfce, nke m hụrụ dị mma.
Eric Moreno dijo
Nnọọ, kedu ka ị mere? Don't nweghị ọtụtụ ihe iji wụnye Linux Mint Xfce "Rebecca", M wụnyere Wine ma tinye egwuregwu n'ebe ahụ (Borderlands) ihe niile yiri ka ọ na-aga nke ọma ruo oge arụ, a gwara m na " Pixel shader 3.0 "na-efu efu, ị nwere ike iduzi m ma ọ bụrụ na A ga-enwe ihe ngwọta, na windo ma ọ bụrụ na egwuregwu ahụ bilitere nke ọma.
Zaghachi Eric Moreno
Daalụ maka ịkekọrịta ntakịrị ihe ịmara gbasara sistemụ nrụọrụ a, ọkachasị maka ndị anyị na-enyocha isiokwu a. Ezi! 🙂
Zaghachi na Server1212
Cedeño Angel dijo
Ndewo, abụrụ m onye ọhụụ na ụwa Linux, etinyego m cinnamon cininton mint 17 mana mgbe m bidoro ọ na-agwa m ihe dịka cpu na-arụ ọrụ karịa mkpa, ikekwe n'ihi njehie ọkwọ vidiyo, enwere m vx900 Chrome 9 hd , ị nwere ike inyere m aka site n'igosi ebe m nwere ike ibudata ọkwọ ụgbọ ala iji nwee obi ụtọ na distro m na-ekele gị nke ukwuu ...
Zaghachi Angel cedeño
M na-eji Mint awa ole na ole wee ruo ugbu a ọ na-aga nke ọma, ahụrụ m ya n'anya.
Akwa, daalụ 😀
M arụnyere Linux Mint na PC na MSI 760GM motherboard (Ati 3000 video onboard), sọrọ mode na windo.
Enweela m mmelite nke 2.
Site na Mmelite Njikwa (nke ngosi): Ọ bụ ihe amamihe dị na imelite ruo na Nwelite 3 Mmelite, ma na-arụsi ọrụ ike na nchịkọta ọhụrụ na-anọchi ndị ọhụrụ na-abata?
Ọ bụrụ na arụ ọrụ ahụ na Terminal:
Iwu ndị a: sudo apt-nweta nwelite && sudo apt-nweta nwelite, ha ga-emelite mmelite niile dị, rue ndị Ọkwa 5?
Kedu ka esi enweta nke a site na Terminal, nke mere na ọ na-emelite mmelite nke ọkwa ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ ruo ọkwa 3 ma ọ bụ 2?
Ndewo. Naanị m wụnye Linux mint 17.1 ma enweghị ike ijikọ WiFi, o doro anya na ndị ọkwọ ụgbọala na-efu. Ọ bụ ndu ịwụnye ha ga - ekwe omume?
hi panas Achọrọ m enyemaka wụnye mintosx Linux Mint na ụda anaghị amata m achọghị m imegharị ndị ahịa m achọghị windo 7 naanị chọrọ Linux mint ọ masịrị ya nke ukwuu kedu ka m ga-esi wụnye onye ọkwọ ụgbọ ala
Zaghachi na alberto garcia
iCup 2014 Brazil - Ihe ndozi nke Linuxeros